यो कास्टिङ मात्र होे, ‘फिल्म सुरु हुन बाँकी नै छ – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
यो कास्टिङ मात्र होे, ‘फिल्म सुरु हुन बाँकी नै छ
नेकपा अध्यक्ष, माधव कुमार नेपाल
९ माघ, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले आज गरेको जनप्रदर्शन पनि जनसभालाई बोल्ने क्रममा नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रदर्शनमा जनआन्दोलनको झल्को देखिएको छ । तर यो कास्टिङ मात्र भएको भन्दै उनले भने, ‘फिल्म सुरु हुन बाँकी नै छ ।
काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई पार्टीले दण्ड दिन सुरु गरिसकेको बताए । अध्यक्षबाट हटाउनुका साथै साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । आफू भर्खर सुर्खेतबाट आएको भन्दै ‘उहाँले कतै मैले गल्ती गरेँ भनेर पत्र पो पठाएको छन् कि ? म पनि संसद पुनःस्थापनाको आन्दोलन सहभागी हुन्छु भन्नु भएको छ कि ? मैले नेताहरुलाई सोध्न पाएको छैन ।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली तानशाह हिटलरको बाटोमा हिडेको बताएका छन् ।
ओलीको त्यस्तो तानाशाही र निरंकुश प्रवृतिका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपरिरहेको भन्दै उनको तानाशाही कदमलाई नेपाली जनताले परास्त गरेरै छोड्ने बताए ।
उनले सातै प्रदेश, प्रवासी नेपाली र समग्र जनता ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलित भएको भन्दै ओलीसँग अरिंगालको गोलो र साइबर सेनामात्रै भएकाले विशाल पार्टीसँग लड्ने क्षमता उनीहरुमा नरहेको अध्यक्ष नेपालले बताए ।